Site na mmepe ngwa ngwa nke ahịhịa artificial na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụrụla akụkụ dị oke mkpa nke ndụ ndị mmadụ kwa ụbọchị, ma ọ bụ n'ụlọ ahịa, ụlọ akwụkwọ mahadum, ụlọ ọrụ ọfịs ma ọ bụ ebe obibi. Arfik wuru E nwere ụdị ọrụ dị iche iche nke njikwa turf. Akpa, Lawn grasse ...
Enwere ike iji turfị wuruwuru n'ọtụtụ ụzọ maka ogige, ụlọ, yana ebumnuche azụmahịa. Ga - eji ihe eji eme ihe na - enweghị atụ, ọ ga - eju gị anya. Enwere ike iji ahịhịa wuru ọ bụghị naanị na mbara èzí gị na n'azụ ụlọ gị, kamakwa n'ụlọ, ụlọ mgbatị ahụ, ọfịs, ma nwee ike ọ ...
Jieyuanda ahihia na-agwa gị uru nke ahịhịa artificial
N'ihe banyere turf, ị ga-eche echiche nke ọma n'ubi bọọlụ ụlọ akwụkwọ na ubi ụlọ, mana enwere ya karịa ka ị chere. Youtụleela iji ya n'ime ụlọ? Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, mgbe ahụ nnukwu ndị na-eche echiche ga-eche n'ụzọ yiri nke ahụ. Ma ọ bụrụ na ịgụbeghị ...
Mmezi nke usoro mmegharị ahịhịa
1. Iji mee ka mmiri dị mma nke turf wuru na ala egwuregwu, a ga-ekupụ quartz ájá ma mee ka ọ dị ọcha mgbe niile iji mee ka ịdị n'otu na ịdị larịị nke quartz ájá. 2. Otutu nke aja quartz bu ihe dika 14-16mm. 3. Iji nọgide na-enwe nkịtị ego nke ájá, anyị ...
Etu esi ekpe ikpe ikuku simulation
Na nkọwa zuru ezu, enwere isi ihe ndị a: 1 nkasi obi Ka ịdị nro nke eriri tebụl wuru na-adaba na ahịhịa nkịtị, ọ ka mma, ma n'otu oge ahụ, ọ na-ebelata ọnụọgụ nke egwuregwu. 2 nche Onye mbu nwere mmetuta na nlere anya na nchekwa nke u ...